Famerenana sary vetivety amin'ny Adobe Photoshop | Famoronana an-tserasera
Retouching sary haingana miaraka amin'ny Adobe Photoshop ho an'ireo rehetra mitady hamerina hamerina hamerina ny sary haingana sy tsy mila fahalalana mandroso an'ny Photoshop. Betsaka ny olona manana sary tsy misy kalitao amin'ny fahitana azy: ny fifanoherana ambany, ny feo maloka, sns., Noho izany antony izany dia ny fahalalana ny fomba famerenana haingana ireo sary ireo dia afaka manampy antsika manana fahatsiarovana tsara kokoa tsy maty.
Get hatsarao amin'ny fomba mandeha ho azy ireo sarinao rehetra ireo amin'ny fampiasana a hetsika ny Photoshop hamela anao izany apetaho amin'ny sary rehetra io retouch io ihany. Raha ny fanatsarana kely ny sary fotsiny no tadiavinao satria manana bilaogy ianao na zavatra mitovy amin'izany lahatsoratra Hanampy anao betsaka amin'izany lafiny izany.
Tsy isika rehetra no tokony ho manam-pahaizana momba ny Photoshop mianatra manatsara kely ireo sary nalainay tamin'ny dia iray na sarin'ny fotoam-pianakaviana tiantsika fotsiny omeo kalitao kely kokoa izy io, izany no antony amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika fitaovana sasany hanatsarana ny sarinay manazava haingana ireo dingana amin'ny fomba milamina mba hanamorana ny fizotrany. Hampiasa teknika matihanina saingy voafintina izahay mifantoka amin'ny safidy fototra fotsiny hanatsarana ny kalitaon'ny sary.
Ireo dingana voatanisa dia torolàlana izay mety miovaova arakaraka ny filan'ny mpampiasa tsirairay, ny idealy dia izay samia manapa-kevitra hoe inona ny vokatra azo ampiharina amin'ny sary tsirairay. Ho an'ny fianarana tsara kokoa, tsara kokoa ny tsy maka tahaka fa ny mahatakatra ny hevitra ary mampiasa azy amin'ny fombantsika ...
Ao amin'io lahatsoratra Hianarantsika izao manaraka izao:
Hatsarao ny sarin'ireo sarinay
Mampiasà sosona fanitsiana
Esory amin'ny sary ny singa tsy ilaina
Mamorona hetsika hamerenana mandeha ho azy ny fizotrany
1 Manokatra ny sarinay amin'ny Photoshop izahay
1.1 Mamorona sosona fanitsiana (Photo Retouch)
1.2 Ny sosona fanitsiana famirapiratana sy fifanoherana
1.3 Haavo fanitsiana haavon'ny
1.4 Sivana fanitsiana henjana
1.5 Ny fanitsiana fandanjana loko
2 Esory amin'ny sary ny singa tsy ilaina
2.1 Mamorona hetsika amin'ny Photoshop (mandeha ho azy retouching sary)
Manokatra ny sarinay amin'ny Photoshop izahay
Ny zavatra voalohany hataontsika dia sokafy ny sary eto Photoshop manomboka manamboatra azy io indray. Miaraka amin'ny sary misokatra ao Photoshop tsindrio ny bokotra havanana totozy eo amin'ilay sosona lehibe ary avereno averina.
Raha vantany vao naverinay ny sosona, ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia ny manomboka mamorona sosona fanitsiana, Eto no hamarenantsika ny sarinay.
Mamorona sosona fanitsiana (Photo Retouch)
Ny fanitsiana dia mamela antsika mamorona sosona ambony izay mihetsika amin'ny sosona ambany, amin'ny teny hafa dia mamela antsika apetaho ny vokany amin'ny sosona iray nefa tsy manova ny sosona voalohany. Maninona no mamorona sosona fanitsiana fa tsy mampihatra mivantana ny vokany? satria ny fanitsiana dia mamela antsika hiverina ovao ny fanovana isaky ny irinay, etsy ankilany dia manampy antsika haka sary an-tsaina ny fiovan'ny sary tsirairay.
Rehefa avy nahita fampahalalana kely momba ny sosona fanitsiana dia afaka manomboka isika avereno jerena ny sarinay.
Ny sosona fanitsiana famirapiratana sy fifanoherana
Tsindrio ny bokotra fanitsiana hita eo ambanin'ny faritra misy ny sosona ary safidio a famolavolana famirapiratana sy fifanoherana. Ity sosona fanitsiana nmamela anao hanazava sy hampifanohitra bebe kokoa ny sarinay.
Haavo fanitsiana haavon'ny
Ny zavatra hataontsika manaraka dia ny famoronana a ambaratonga fanitsiana haavon'ny mba hampitomboana ny fisongadinana sy ny aloka amin'ny sarintsika, ny mainty sy ny fotsy hoditra dia hanjary hiresaka mahery kokoa.
Sivana fanitsiana henjana
Amin'ny fotoana maro dia hihaona isika sary miloko marefo, azo amboarina mora foana ity raha mampiasa a sosona fanitsiana henjana. Manapa-kevitra izahay hoe hatraiza ny hamafin'ny loko tadiavinay ho an'ny sarinay.
Ny fanitsiana fandanjana loko
Imbetsaka isika rehefa mahita ny sarintsika milahatra, dia tsapantsika fa manana izy ireo loko volomboasary avy amin'ny masoandro be loatra na loko manjaka hafa manova tanteraka ny endritsika, io dia antsoina hoe loko manjaka ary azo ahitsy amin'ny sosona fanitsiana fandanjana loko.
La mpandoko loko Tsy fahombiazana ho azy io fa zavatra mahazatra satria sary nalaina tao anatin'ireo toe-javatra nahatonga ny lokony dia ireo. afaka ahitsio ny mpandoko loko na ovao tsotra izao araka ny itiavantsika azy, dia mbola manana sary misy loko volomboasary manjaka ary liana amin'ny hamoronana azy kokoa, na ahoana na ahoana manapa-kevitra.
Usar mora ny mandanjalanja loko mila mamorona iray fotsiny isika fifandanjana colo fifandanjanar ary avy eo manapa-kevitra hoe iza no loko tiantsika ovaina, amin'ny alàlan'ny loko mifangaro no ahatongavantsika amin'izay tadiavintsika.
Samy nahita sarin'ny dia iray isika rehetra singa iray tsy ilaina no niditra tao amin'ilay sary, Avy amin'ny olona mandalo ao aorianao ary tsy tsapanao izany rehefa naka ny sarinao tamina saka mandehandeha eny an-toerana ianao, na inona na inona tianao esorina dia azo atao haingana miaraka amin'ilay fitaovana patch Photoshop.
La fitaovana patch de Photoshop mamela antsika misafidy faritra manokana ary soloy hafaToy izao no fiasan'ity fitaovana ity, amin'ny teny hafa dia misafidy faritra tsy misy lesoka izy ary manitsy azy amin'ny alàlan'ny fanaronana faritra iray tsy misy kilema (toa mikorontana nefa tsotra be izany).
Misafidy ny fitaovana patch izahay ary mamorona safidin'ny singa tianay hamafa izahay aorian'izay dia afindrantsika amin'ny faritra mifamatotra amin'ny hadisoana tianay esorina ny safidy (izany dia tsy dia miharihary loatra ny famerenana indray satria ny jiro sy ny aloka dia mitovy amin'ny akaikin'ny hadisoana kokoa noho ny lavitra)
Efa nahavita isika avereno haingana sy haingana ny sarinay mampiasa sosona fanitsiana Photoshop fotsiny. Ny zavatra manaraka hataontsika izao dia mandeha ho azy ny fizotrany mba hampiharana azy amin'ny sarinay rehefa te-hamerina ilay famerenana mitovy ihany isika.
Mamorona hetsika amin'ny Photoshop (mandeha ho azy retouching sary)
Iray ihany ny hetsika filaharan'ny hetsika voaangona izay ampiharina amin'ny sary mandeha ho azy, tena ilaina io rehefa be isika sary izay mitaky famerenana famerenana mitovy en Photoshop. Izay hataontsika dia tsy misy hafa amin'ny nataontsika tamin'ireo dingana teo aloha fa isika kosa hamorona a peo so it Photoshop raketo ary tahirizo ny fanovana rehetra izay ataontsika araka ny sary.
Manokatra izahay el menio hetsika hita ao amin'ny fikandrana menio ambony an'ny Photoshop, vantany vao ananantsika misokatra, ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia ny manome mamorona hetsika vaovao (ny bokotra dia mitovy amin'ny famoronana sosona vaovao)
Mamorona hetsika vaovao izahay amin'ny alàlan'ny fanindriana ny kisary sosona vaovao ao anatin'ny menio fihetsika. Vantany vao namorona hetsika vaovao isika dia hisokatra ny menio izay azontsika atao lazao ny hetsika nataonay.
Aorian'izany dia tsindrio ny kisary manomboka firaketana (kisary boribory) ary nanomboka namerina namerina ny sarinay izahay, manomboka amin'ity fotoana ity dia hosoratana anarana sy hotehirizina ny fanovana rehetra.
Rehefa avy nanao ny touch-up rehetra amin'ny sarinay no omenay ny sary masina ajanony ny firaketana ny hetsika ary ny hetsika hataonay dia ho vonona hampiasaina amin'ny sarinay ho avy rehetra. HO AN'NY mampiasa hetsika mila fotsiny isika manokatra sary mankanesa any amin'ny menio hetsika tadiavo ny hetsika ataonay dia milalao. Raha te-hiova izahay amin'ny famerenana sary ny sary iray dia mila tsindrio indroa fotsiny ianao amin'ny sosona fanitsiana ary manaova fanovana tsirairay amin'ny sary tokana.
Para hatsarao ny sarintsika fa tsy mila manam-pahaizana manokana isika Photoshop raha ny tadiavintsika dia ny manamboatra tena tsotra sy haingana hanatsarana ny kalitaon'ny sary amin'ny ankapobeny. Ankehitriny ianao dia afaka manatsara ireo sary mankaleo rehetra ireo nefa tsy misy fiainana jerena.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Retouching sary haingana miaraka amin'ny Adobe Photoshop